हाङयुग अज्ञात -
रिकार्डो बोल्जान, भेनिस (इटाली) -
श्रीकमल द्विवेदी -
सुजता अधिकारी -
होटलमा प्रेमी–प्रेमिका होस् या श्रीमान–श्रीमती, महिला–पुरुष देख्नासाथ मिडिया साथै लगेर छापा मार्ने र थुन्ने काम सभ्य समाजका लागि पाच्य हुँदैन। राज्यले प्रहरी–प्रशासनको यस्तो प्रवृत्तिमा अंकुश लगाउनैपर्छ।
साना खुद्रे पसलहरु वा रेष्टुरेण्टमा पाउरोटी खाने झोले पर्यटक मात्र लगेर पर्यटन क्षेत्र उभो लाग्छ त? आजको भोलि प्रतिफल खोज्ने क्षेत्र पर्यटन होइन। पर्यटकलाई सुविधा दिएर फाइदा लिने अवस्थामा हामी नभएका कारण अनुभव बेचेर प्रतिफल बढाउनुपर्ने अवस्था नेपाली पर्यटन उद्योगको छ। त्यसैले दिनहुँ जस्तो हुने जात्रा पर्वहरु, सय भन्दा बढी जातिहरुका धर्म, संस्कृति, संस्कारहरुलाई पर्यटनको भाषामा बेचेर लाभ लिन ढिलो गर्नु हुँदैन। विस्तृतमा
टिभी हेर्नेलाई हसाँउथे धुर्मुस–सुन्तली । हामी पनि हाँस्यौं होला । खुसी भयौं होला । काँचको पर्दामा हाँसो फुलाउने यी जोडीलाई बर्दिवासका मुसहरले टिभीमा देखेका थिए–थिएनन्? सधैं गरिबी, अभाव र पीडाले डामिएका ती मुसहरले कहाँ पाएर हेर्दा हुन् टीभी? रहर त कति हो कति हुँदो हो तर बाध्यता? बाध्यता र अभाबभन्दा ठूलो शत्रु के हुन्छ ?र, त्यही काँचका पर्दामा फुल्ने यो जोडीका रङ्गीविरङ्गी फूललाई ? मलाई लाग्छ, बर्दिवासका मुसहरले हाँस्न र खुसी हुन टीभी हेर्नु परेन। आफ्नो बस्तीमा पोतिएको खुसीको रङ् देखर हाँस्न थालेका छन्, अहिले ती। खुसीको रङ् कस्तो हुन्छ? कठीन छ उत्तर दिन। उत्तर खोज्न बर्दिवासको मुसहर वस्ती नै जानुपर्छ । जहाँ पोतिदै छ, त्यो रङ्।
मनोज पाण्डे -
लक्ष्मी खनाल -
नारीले समाज र परिवेशलाई हेरेर आफूलाई परिवर्तन गर्न सक्छे, श्रीमानको घरको सबै जिम्मेवारी लिनसक्छे भने एउटा पुरुषले विवाहपछि आफूलाई परिवर्तन किन गर्न सक्दैन? के श्रीमती घर सम्हाल्नका लागि मात्र हो त? जब नारीलाई अधिकार दिने कुरा आउँछ, त्यसबेला पछि हट्ने अनि घर सम्हाल्नचाहिँ फेरि नारी नै चाहिने?
जमुना वर्षा शर्मा -
रमेश भट्टराई -
कोठामा ताल्चा लगाउनु भएको थिएन। खराब नियत राखेर फुपूको कोठा छिरेँ। फुपू सिरानीमुनि पैसा राख्नुहुन्थ्यो। मैले त्यहाँबाट एक रुपैयाँको थोत्रो नोट निकालेँ। वास्वतमा यो चोरी काम थियो। चोरीको रकम लिएर अगाडिको किराना पसल पुगेँ अनि धुलो रङ किने। फर्केर रङको धुलो जगमा खन्याए अनि चापाकल पेलेर जग भरे। त्यसपछि म लुक्दैलुक्दै किशोरी ग्याङ भएतिर गएँ। यसपाली पुग्दा उनीहरु ताली बजाएर हिन्दी फिल्मको गीत गाउँदै थिए। मैले एउटीलाई ताकेर रङपानी पानी छ्यापेँ। त्यो केटी त मज्जैले भिजी। बाँकी सबैलाई रङपानीको छिटा प¥यो। त्यो रङपानी रेणुका दिदीलाई पनि प¥यो।
अशेष घिमिरे -
कृष्ण महरा -
पुनर्वास आनन्दबजारको समाधान कर्फ्यू हुँदै होइन, देश र मातृभूमीका रक्षक बर्दी विनाका सिपाहीहरुमाथी निषेधाज्ञाको डण्डा युद्व जितेर आएको सिपाहीलाई लात हान्नु हो। त्यसैले, विन्ती छ सरकार, गोविन्द गौतमको परिवारलाई भारत सरकारद्धारा क्षतिपुर्ती भराई न्याय दिलाइ पाऊ।
भगवती पाण्डे -
‘तपार्इं भगवती पाण्डे हो?’ अपरिचित ल्याण्डलाइन टेलिफोनको नम्बरबाट मोबाइलमा आएको कल उठाउनासाथ उताबाट प्रश्न सोधियो, ‘तपाईंले मेरो बारेमा दुई दिन पहिले के लेख्नुभएको थियो? मलाई चिन्नुहुन्छ? म को हुँ? के गर्छु थाहा छ?’
अधिवक्ता सतीश शर्मा -
ऋचा भट्टराई -
भोलि मैले छोरी जन्माएछु भने, छोरीको हात डोर्याउँदै जाँदा कसैले, “अब छोरा चाहिँ कहिले पाउने?” भनेर कसैले सोधे म जवाफ नदिई बस्न सक्दिन। छोरीलाई काखमा राखेर माया गरेजस्तो गर्दै, “मामुलाई एउटा भाइ पाउनु भन त” भनेर मतिर हेर्दा मेरा बाल्यकालदेखिका सबै उत्तर उर्लेर आउँछन् होला। मेरी अमूल्य छोरीको बारम्बार अवमूल्यन भएको कल्पना गर्दै मलाई रिस उठ्छ।
मन्जुकुमारी शर्मा -
नयाँ संविधानको प्रावधानअनुसार नेपालको राज्य संरचना केन्द्र, प्रदेश, स्थानीय तहमा रुपान्तरण भएको छ। यसको व्यवहारिक कार्यान्वयनसँगै सार्वजनिक सेवा प्रवाहको संरचना पनि बद्लिने छ। आवश्यकताअनुसार अब संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहले आ-आफ्नो प्रशासन सञ्चालन गर्नेछन्। संविधानको अनुसुची ६मा रहेको प्रदेशको अधिकार सूचीमा निजामती सेवा समावेश भएको छ। अनुसुची ८ ले स्थानीय तहलाई पनि यो अधिकार दिएको छ। संविधानका यी प्रावधानअनुसार अब संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका आ-आफ्नै निजामति संरचना हुने छन्।
डा. राजेश राई -
हाम्रो जस्तो पहँुचमा भएका अधिकांश वन क्षेत्र समुदायको नियन्त्रणमा रहेको अवस्थामा वन सम्वद्र्धन प्रणालीलाई सरलीकृत गर्नु अपरिहार्य रहेको छ। अझ परम्परागत वन व्यवस्थापन प्रणालीलाई समय सान्दर्भिक विज्ञान र बजारलाई आत्मसात् गर्दै परिस्कृत गराउँदै लैजानु वन प्राविधिकको मुख्य चुनौती हो। यसको लागि मौजुदा वन मन्त्रालयको संस्थागत संरचनालाई पुनरावलोकन गर्दै सम्बन्धित सरोकारवालाको क्षमता अभिवृद्धिको कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु पर्ने देखिन्छ।
छम गुरुङ -
खाना नलिनु अघिः -यो साउले खाना सोध्दा पुग्यो भने ‘आगायो’ भन् हे!
-‘चायो’ भन् न! मलाई फिटिक्कै खसकुरा नआउने। आखिरमा ‘आगायो’ के खाएर भन्न सक्नु ? बल्लबल्ल ‘चायो’ मेरो मुखबाट पाँच किलोको ढक जस्तो गरुङ्गो भएर सुस्तरी प्रक्षेपण हुन्छ। बाले अर्डर दिँदा भात मेरो लागि चैँ ‘हाफ’ भनेको हुन्छ। खाने बेला मैले ‘फुल’ पो खाइसक्छु, कारणः भात चामलको देखापर्छ।
नरेन्द्रकुमार नगरकोटी -
मैलै जीवनमा धेरै बालबालिकाको कान निमोठेँ। कन्सिरीका रौं तानेँ। गालामा चड्कन लगाएँ। पाइपको लौरोले हत्केला बजाएँ। ढाड भाँचिएला जसरी हिर्काएँ। जबजब म बालबालिकालाई निरीह बनाउँदै शासकीय रवाफमा यी कार्य गर्थेँ म स्वयम् बिरामी पर्थेँ। त्यही दिन या भोलिपल्ट सम्बन्धित बालकसित भेटेर सम्बन्ध पुनसर््थापित भएको अनुभूति भएपछि मात्र आफूलाई सजिलो महसुस हुन्थ्यो।
सुरज सुवेदी -
०६३ सालमा माओवादी राष्ट्रिय राजनीतिको मूल धारमा आएपछि आफ्ना करिब ७ सय कार्यकर्तालाई क्यासिनोहरूमा एकै पटक भर्ति गराए। त्यसअघि क्यासिनोमा एमाले समर्थित मजदुर युनियनको बोलाबाला थियो। क्यासिनो ‘सुकुलगुन्डा’को प्रवेश सहज थियो। सित्तैमा विदेशी रक्सी खान पाइने, युवतीहरूसँग सम्पर्क हुने भएकाले यस्ता ‘सुकुलगुन्डा’ पछि टोले गुन्डाहरूलाई लिएर जान थाले। क्यासिनोमा जुवाडेलाई लत लगाउन सुरुमा जानीजानी जिताइन्छ र पछि, पछि त्यो जुवाडे आफ्नो सर्वस्व हार्न थाल्छ। काठमाडौंका केही धनाढ्य सुरुमा रक्सी र युवतीका लागि जाने गरेकोमा पछि जुवाकै लत बस्न थाल्यो।
यमुना अर्याल (काफ्ले) -
हिजो तपाईँले पैसा तिरेर नगरकोटको होटलमा रात कटाएकी युवती यदि तपाईँकी छोरी हुन्थिन् र अरू तपाईजस्तै पुरुष पात्रले त्यसो गरेको हुन्थ्यो भने तपाईँ के गर्नुहुन्थ्यो? यसको जवाफ दिन सक्नुहुन्छ? तपाईलाई पिर हुन्थ्यो अब तपाईकी छोरीको कौमार्य कसैले भंग गर्दिसक्यो, कसैले थाहा पायो भने छोरीको बिहे हुँदैन। आफन्तले थाहा पाए भने थुक्छन्, यस्ती, उस्ती भन्छन् छोरी बिकाउनै सकस पर्थ्यो तपाईलाई तर कति ढुक्कसँग आफ्नै छोरी समानकी युवती लिएर मुड फ्रेसमा निक्कनु भा को महासय?